Foornada Nederlandka, Xirmooyinka, Grill Pan, Casserole - DINSEN
Cunto karinta BBQ
DINSEN Abuuraha nolol wanaagsan
Dinsen Impex Corp wuxuu diiradda saarayaa horumarka joogtada ah iyo hal-abuurka loogu talagalay horumarinta qalabka wax lagu kariyo ee birta, farsamada iyo wax soo saarka. Dhanka kale waxaan sidoo kale bixinnaa OEM, ODM, iyo adeegyo kale.
Warshadeenu waa ogolaansho by ISO9001: 2015 & BSCI, waxaana lagu qalabeeyaa khadadka tuurista DISA-matic iyo khadadka wax soo saarka xilliga ka horeeya, khadadka dhaldhalaalka, iyo qalabka tijaabada oo dhameystiran. Thanks to xarumaha wax soo saarka casriga ah, tas-hiilaadka ilaalinta deegaanka ee kaamil ah, hababka wax soo saarka ee jaango'an, farsamo yaqaanada xirfadlayaasha ah iyo nidaamka tijaabada oo dhameystiran, badeecadaheena kariyaha birta ayaa si deg deg ah looga dhoofiyay in kabadan 20 dal iyo gobol, sida Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Mareykanka iwm, oo waxaan dhisnay iskaashi istiraatiijiyadeed oo muddo dheer ah oo aan la yeelanay macaamiisheenna. Dinsen wuxuu sii wadi doonaa himilada hagaajinta tayada nolosha aadanaha, isagoo gacmaha la wadaagaya macaamiisheenna iyo asxaabteenna gudaha iyo dibaddaba, si loo horumariyo loona iibiyo kuwa karsan, dhaqaatiir badan, jawi ahaanna u roon kuwa wax lagu kariyo.
DA-C25001 / 29001/33001/37001 birta tuur q sare ...
DA-DO21001 / 25001/29001 bir tayo sare leh ...
DA-DO32001 tayo sare leh 2020 cook cook cookware
DA-DO25002 / 27001 cookware 2020 iibin kulul
DA-DO31001 birta wax lagu kariyo 2020 iibinta kulul
DA-DO19001 / 20001/21002/24001/27002/27003 tuur ...
DA-DO23001 birta tayada sareysa loo tuuray 2020 iibka kulul
DA-DO27002 eco-friendly iron cast 2020 iibka kulul
DA-S24001 qalabka wax lagu kariyo ee bey'adda u fiican
DA-S28002 wax lagu kariyo birta wax lagu kariyo oo tayo sare leh
DA-S26001 lagu sameeyay birta shiinaha ee Shiinaha iibka kulul ee 2020
DA-S30001 birta tayo sare leh bey'ada-saaxiibtinimo
DA-S29001 wax lagu kariyo qalabka wax lagu kariyo 2020 iibka kulul
DA-S13002 birta la tuuray pre-xilliyeed iibka kulul ee 2020
DA-S13003 / DA-S16002 / DA-S20003 eco bir bir ah ...
DA-S22002 / DA-S20005 bey'ada-saaxiibtinimo bir bir ...
DA-BC37001 2020 cookware iibinta kulul oo lagu sameeyay c ...
DA-BC26001 / 32001/32002/37001/37002 birta ...
DA-BC13001 Cunto karinta lagu sameeyay Shiinaha 2020 iibka kulul
DA-GP38002 birta tayada sare leh ee tayo sare leh 2020 iibinta kulul
Waxaan sidoo kale siinaa faa'iidooyin waaweyn dhammaan macaamiisheenna, labadaba kuwa cusub iyo kuwa soo noqonayaba. Xor ayaad u tahay inaad hubiso sababo badan oo aad ku noqon karto macmiilkeena oo aad u leedahay khibrad iibsi aan dhib lahayn.
Roob culus oo ka dhacay Henan
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, Zhengzhou, Xinxiang, Kaifeng iyo meelo kale oo ka tirsan Gobolka Henan ayaa waxaa soo maray roobab aad u culus. Nidaamkani wuxuu muujiyey astaamaha roob badan oo ururay, muddo dheer, roob xoog leh oo muddo gaaban ah, iyo darafyo caan ah. Bartamaha Saadaasha Hawada ... / p>
Juun 28, 2021
Dinsen wuxuu u dabaaldegayaa sannad-guuradii 100-aad ee aasaaska Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha！
Boqol sano, safar socdaal ah. Laga soo bilaabo doon yar oo casaan ah ilaa markab weyn oo horseedi doona xasilloonida Shiinaha iyo safarka muddada-dheer, hadda, Xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha wuxuu ugu dambeyntii keenay dhalashadiisii ​​boqol-guurada. Laga soo bilaabo xisbigii ugu horreeyay ee Marxist oo leh in ka badan xubnaha xisbiga 50, wuxuu leeyahay ... / p>
Cinwaanka: NO.70 RENMIN ROAD, HANDAN HEBEI CHINA